ပြည်ထောင်စုနေ့ နှင့် ပင်လုံစာချုပ် « ပြည့်စုံ
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)ရက်နေ့သည် (၆၁) နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ကို ကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၂)နေ့သည် ပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်သည်ဆိုတာကို မြန်မာပြည်သားအားလုံးသိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာ ပြဌာန်းသင်ကြားစေခဲ့တဲ့သလို အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုလည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အဲဒီနေ့မှာ ကျောင်းတွေပိတ်၊ ရုံးတွေပိတ်ပြီး တခမ်းတနားကျင်းပပြုလုပ်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။“ကျနော်လိုချင်တဲ့ ညီညွတ်ရေးက တတိုင်းပြည်လုံး လူတမျိုးလုံးရဲ့ လွတ်လပ်ရေး၊ လူတမျိုးလုံးရဲ့ အကျိုး၊ အဲဒီလို တူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ တူညီတဲ့အကျိုး တူညီတဲ့အလုပ် ဒါတွေကိုရအောင် အဲဒီလို တူညီတဲ့အကျိုး၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေရအောင်တူညီတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ပါးစပ်က ပြောရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ ပါးစပ်ကညီညွတ်ပါတယ်လို့ ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ အလုပ်မှာလည်းတူရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း၊ အဲဒါမျိုးကိုမှ ညီညွတ်ရေးလို့ခေါ်ထိုက်တယ်။”
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (၂၃.၁.၄၆ ဖဆပလ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံကြီးတွင် တင်သွင်းသော အဆိုအမိန့်မှ ကောက်နုတ်ချက်)
နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှတို့က ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူတို့၏ စနစ်အတိုင်း နယ်ချဲ့ခြင်းနှင့် အတူ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဗမာပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက် ပြီးသည်နှင့် တောင်တန်းမြေပြန် သွေးခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြည်နယ်အနှံ့ကိုသွားပြီး ဆွေးနွေးစည်းရုံးခဲ့သည်။ သွေးခွဲမှုတွေကို စုစည်းခဲ့သည်။ ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
(၁) ပထ၀ီနယ်နမိတ် အထင်အရှားရှိခြင်း။
(၂) ဗမာစကားမဟုတ်သည့် ဘာသာစကားရှိခြင်း။
(၃) ယဉ်ကျေးမှု (ဓလေ့ထုံးစံ) တမျိုးတည်းရှိခြင်း။
(၄) ရာဇ၀င်လာတမျိုးတည်း လူစုရှိခြင်း။
(၅) စီးပွားရေး လုံလောက်ခြင်း
(၆) လူဦးရေ အတော်အတန်ရှိခြင်း။
(၇) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် သီးခြားနေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိခြင်း။
– ဆိုသည့်အချက်တွေကိုစံထားပြီး ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ်၊ လူမျိုးစုပြည်နယ် ဆိုပြီးခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၄၇ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံတွင် ဗမာပြည်နှင့် တောင်တန်းနယ်များ ပူးပေါင်းရေးအတွက် သဘောတူညီကြောင်း လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ရှေ့ပြေး ဖြစ်သော ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်မှ စော်ဘွားများ၊ ချင်း၊ ကချင်ခေါင်းဆောင်များ၊ တောင်တန်းသားများ ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (The Supreme Council of the United Hill Peoples: SCOUHP) ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဖဆပလခေါင်းဆောင်များပါဝင်ခဲ့သည်။ ပင်လုံစာချုပ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၂၃ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ပင်လုံစာချုပ်သည် ဗမာပြည်၏ “ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ” ပြည်ထောင်စုပုံစံထူထောင်ရေးအတွက် အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တန်းတူညီမျှရေး၊ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် အုတ်မြစ်ချခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ယနေ့ကာလအထိ ဗမာပြည် ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုက ယင်းလမ်းစဉ်တွေကို ချေဖျက်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်တွင်းစစ်တွေကိုဖန်တီးကာ စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စနစ်ထားရှိခဲ့သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေး၊ ရှင်သန်ရေး အတွက် ကောက်ကျစ်နည်းတွေကို အမျိုးမျိုး ရာသီအလိုက် မရိုးနိုင်အောင်ကို အသုံးပြုနေခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် (၄၅) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်မှာ သက်သေတွေပြခဲ့ပါသည်။ ဖက်ဆစ်ဗိုလ်နေ၀င်းအုပ်စိုးသည့်ကာလတွင် တပြည်ထောင်စနစ်ကို အဓမ္မဖန်တီးခဲ့သည်။ ၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် စစ်အုပ်စုသည် သူတို့၏ အကျပ်အတည်း ထွက်ပေါက်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့သည်။ စစ်အုပ်စုသည် စစ်တန်းလျားပြန်ရမှာ၊ အာဏာလက်လွှတ်ရမှာစိုးသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို တမင်အာဏာလွှဲမပေးဘဲထားခဲ့သည်မှာယနေ့အထိပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲမည့်အစား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သည့် ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုက သေနတ်နှင့်စစ်တပ်ကိုလက်ကိုပြုကာ သူတို့အတွက် အာဏာမြဲရေး အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ တကယ်စည်းလုံး ညီညွတ်ပြီး တိုးတက်အောင်တော့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး တိုင်းပြည်ဟာ တနေ့တခြား အဖက်ဖက်ကသာအောက်ကျနောက်ကျနဲ့ အောက်တန်းကျပြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာဏာမြဲရေးအတွက် အရှက်တရား၊ သိက္ခာကင်းမဲ့လှစွာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲ အာဏာမြဲရေးလုပ်လာရင်း ၂၀၀၃ မေ (၂၉-၃၀) ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲကိုဖန်တီးခဲ့သည်ကို အားမရ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူတွင်မကသေး ဘုရားသားတော်သံဃာတော်များကိုပါ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမှုများကို တနေ့တခြားရဲတင်းစွာပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ တနေ့တခြား သတ်ဖြတ်တာ၊ လုယက်တာ၊ အမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာ၊ ပေါ်တာဆွဲတာ၊ သယံဇာတများဖြစ်သော သစ်၊ ကျောက်သံပတ္တမြား ခိုးရောင်းခိုးထုတ်နေတာတွေဟာ မရပ်သေးပါ။ လက်နက်ကိုင် အပစ်ရပ်ငြိမ်းအဖွဲ့တွေဆို မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ခွင့်များ၊ ဘိန်းစိုက်ဘိန်းရောင်းခွင့်များ ပေးထားပြီးငြိမ်ဆေးကျွေးထားပြီးနှစ်သိမ့်ခဲ့ကြသည်။ အခုလိုဖြစ်ရပ်တွေက အထင်အရှားမို့ ဒီမိုကရေစီမရသမျှ ပြည်ထောင်စုသစ်ကြီးဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၁၆၊၂၊၉၈)မွေတော်ဓါတ်ဆင်စေတီ၊ မိုးဗြဲတွင်ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် “ ပြည်ထောင်စုတစ်ခု ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ ဗမာတွေရဲ့ ကတိအပေါ်မှာမတည်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများအားလုံး တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်သစ္စာရှိမှုအပေါ်မှာ တည်ပါတယ်” ထို့အတွက်ကြောင် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားပြည်ထောင်စုဖွားညီနောင်အပေါင်းတို့ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုမူစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့တတွေ လက်တွဲညီစွာနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ကြဖို့အတွက် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကို ပြန်လည်တည့်မတ်ကြပါစို့။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ်
မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် စပ်ဖများအားလုံးတို့အပြင် ရှမ်းပြည်နယ်များ၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသများနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များတို့တက်ရောက်ကြသော ပင်လုံမြို့တွင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးကြီးတရပ်တွင် ကြားဖြတ်မြန်မာအစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းတို့သည် လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမို၍ လျင်မြန်စွာရရှိလိမ့်မည်ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအဖွဲ့ဝင်တို့သည် ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီကြလေသည်။
၁။ တောင်တန်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့(တစညဖ)၏ ကြိုးကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံချက်အရ တောင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်စားလှယ် တဦးကို ဘုရင်ခံကရွေးချယ်၍ နယ်စပ်ဒေသများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်ထားရမည်။
၂။ ဤအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် ဌာနလက်ကိုင်မရှိကောင်စီဝင်တဦးအဖြစ်ခန့်ထား၍ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်ပကိစ္စရပ်များတွင် ထုံးနည်းဥပဒေရ အမှုဆောင်ကောင်စီ၏ အာဏာလက်အောက်သို့ ရောက်ရှိသည့်နည်းတူ နယ်စပ်ဒေသကိစ္စများကိုလည်း အမှုဆောင်ကောင်စီ၏ အာဏာအောက်သို့ ရောက်ရှိစေရမည်။ ဤနည်းလမ်းများအတိုင်း နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကိုပေးအပ်ရမည်။
၃။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ၎င်းနှင့်လူမျိုးချင်းမတူသော ဒုတိရအတိုင်ပင်ခံနှစ်ဦးက ကူညီစေရမည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့သည် ၎င်းတို့အသီးသီးသက်ဆိုင်သည့်နယ်များ၏ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်၍ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှာအခြားနယ်စပ်ဒေသအားလုံးတို့၏ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ထုံးနည်းဥပဒေအရ တွဲဖက်တာဝန်ယူရသည့်မူအတိုင်း ရွက်ဆောင်စေရမည်။
၄။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများ၏ တဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဒုတိရအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များသည် နယ်စပ်ဒေသများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြသည့် အခါ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၅။ အထက်တွင်သဘောတူညီသည့်အတိုင်း ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီကို တိုးချဲ့မည်ဖြစ်သော်လည်း နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ယခုခံစားနေရသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို မည်သည့် နည်းနှင့်မဆို တစုံတရာလက်လွတ်စေရန် အဆိုပါ ကောင်စီက ပြုလုပ်ခြင်းမရှိစေရ။ နယ်စပ်ဒေသများအတွက် နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ရှိစေရမည်ဟူသောမူကို သဘောတူညီကြသည်။
၆။ ပူးပေါင်းထားပြီးသည့် ဤမြန်မာပြည်အတွင်း သီးသန့်ကချင်ပြည်နယ်တခုနယ်နမိတ် သတ်မှတ်၍ တည်ထောင်ရန် ပြဿနာမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့ သီးခြားပြည်နယ်တခု ထားရှိသင့်ကြောင်းကို သဘောတူညီကြသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက် ထမြောက်ရန်အလို့ငှာ ပထမခြေလှမ်းအနေဖြင့် ၁၉၃၅ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အက်ဥပဒေအရ နောက်ဆက်တွဲစာရင်းပါ အပိုင်း(၂)ဒေသများကဲ့သို့ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင်နယ်စပ်ဒေသအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိရအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမည်။
၇။ နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်သူနယ်သားတို့သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အခြေခံများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော အခွင့်အရေးများတို့ကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၈။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူညီကြသည့် အစီအစဉ်မှာ ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်နယ် နယ်မြေစုတွင် ယခုအပ်နှင်းထားပြီးသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်။
၉။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူညီကြသည့်အစီအစဉ်မှာ မြန်မာပြည်အခွန်တော်ငွေများမှ ကချင်တောင်တန်းနယ်များနှင့် ချင်းတောင်တန်းနယ်များက ရသင့်ရထိုက်သော ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ၊ မြန်မာပြည်နှင့် ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်နယ်မြေစု၏ ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့ ကချင်တောင်တန်းနှင့် ချင်းတောင်တန်းများအတွက် အလားတူအစီအစဉ်များကို ထားရှိကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဖြစ်နိုင်မည်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီက နယ်စပ်ဒေသများ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိရအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် အတူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုရမည်။
အေတီအမ်၊ အိုင်တီအက်စ် အမ်၊ ဖလမ်း။
သထုံ စပ်ဖလုံ၏ ကိုယ်စားလှယ်။
—— ———– ——- ——- ——– ———
Dated the12th February 1947,
1. A Representative of the Hill Peoples, selected by the Governor on the recommendation of representatives of the Supreme Council of the United Hill Peoples (SCOUHP), shall be appointedaCounsellor for Frontier Areas shall be given executive authority by similar means.
2. The said Counsellor shall also be appointedaMember of the Governor’s Executive Council, without portfolio, and the subject of Frontier Areas brought within the purview of the Executive Council by Constitutional Convention as in the case of Defence and External Affairs. The Counsellor for Frontier Areas shall be given executive authority by similar means.
5. Though the Governor’s Executive Council will be augmented as agreed above, it will not operate in respect of the Frontier Areas in any manner which would deprive any portion of those Areas of the autonomy which it now enjoys in internal administration. Full autonomy in internal administration for the Frontier Areas is accepted in principle.
(Signed) Aung San
(Signed) Sinwa Naw, Myitkyina
(Signed) Zaurip, Myitkyina
(Signed) Dinra Tang, Myitkyina
(Signed) Zau La, Bhamo
(Signed) Zau Lawn, Bhamo
(Signed) Labang Grong, Bhamo
(Signed) U Hlur Hmung, Falam
(Signed) U Thawng Za Khup, Tiddim
(Signed) U Kio Mang, Haka
(Signed) Saohpalong of Tawngpeng State.
(Signed) Saohpalong of Yawnghwe State.
(Signed) Saohpalong of North Hsenwi State.
(Signed) Saohpalong of Laihka State.
(Signed) Saohpalong of Mong Pawn State.
(Signed) Saohpalong of Hsamonghkam State
(Signed) Representative of Hsahtung Saohpalong. Hkun Pung
(Signed) U Tin E
(Signed) U Htun Myint
(Signed) U Kya Bu
(Signed) Hkun Saw
(Signed) Sao Yape Hpa
(Signed) Hkun Htee
Like this:Like Loading...	12,February, 2008 - Posted by	pyaesone |
Article	No comments yet.
About me နေတာက ထိုင်းမှာ မွေးတာက ဝေါမှာ ရောက်တာက ၂၀၀၄
Mr WordPress on Hello world!	Article poem Uncategorized Site info